EPL: Kooxda Chelsea oo hoggaanka u qabatay horyaalka, kaddib markii ay Stamford Bridge ku xaaqday Everton… + SAWIRRO – Gool FM
EPL: Kooxda Chelsea oo hoggaanka u qabatay horyaalka, kaddib markii ay Stamford Bridge ku xaaqday Everton… + SAWIRRO
Haaruun November 5, 2016
(London) 05 Nof 2016 – Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa hoggaanka u qabtay horyaalka Ingiriiska ee Premier League kaddib markii ay 5-0 ku xaaqday Everton oo ay ku soo dhowaysay garoonkeeda Stamford Bridge, iyadoo uu labo jeer shabaqa soo taabtay Hazard.
Chelsea ayaa goolasha la horreysay waxaana goolka koowaad u dhaliyey 19’daqiiqo Eden Hazard, kaddib markii baas uu ka helay Diego Costa inta kubadda difaac ka leexsaday dhinac ka dhigay goolhayaha, kubadda oo joog hoose ku socotay ayaana shabaqa cuskatay, kulanka ayaana sidaas ku noqday 1-0 ay ku gacan sarreysay Blues.
Markale kooxda Chelsea ayaa hoggaanka ciyaarta dheereysatay wax ka yar daqiiqad goolkii Hazard, markii uu isagoo ku jira xerada ganaaxa uu helay kubbad uu dadab ka soo qaaday Pedro Rodriguez, sidaasna kubbada labadiisa lugood uga dhex dusiyey goolhayaha Everton, kulanka ayaana sidaas ku noqday 2-0 ay hoggaanka ciyaarta ku haysatay naadiga martida loo ahaa ee Chelsea.
Kooxda Chelsea ayaa goolka saddexaad la timid waxaana kubbad uu gees laad (koorno) dhinaca midig ka soo qaaday Hazard madax ku wareejiyey 42’daqiiqo Nemanja Matic, iyadoo ay kubaddu u tagtay Diego Costa oo ku jiray xerada ganaaxa Everton sidaasna goolka saddexaad laad xoog leh uga dhaliyey, kulanka ayaana lagu kala nastay 3-0 ay ciyaarta ku hoggaaminaysay Blues.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay kooxda Chelsea ayaa iska sii wadatay bandhiggeeda cajiibka ah, waxaana goolka afaraad u dhaliyey 56’daqiiqo Eden Hazard, kubbad uu u dhiibtay Pedro oo uu si qurux badan cirib ugu wareejiyey, waxaana uu ahaa goolkiisii labaad oo uu Hazard dhaliyo kulankan.
Goolkii shanaad ee kooxda Chelsea oo sidii daadkii ugu socotay shabaqa Everton ayaa yimid, waxaana kubbad uu goolhayaha Everton ka badbaadiyey Eden Hazard 65’daqiiqo dhammaystiray Pedro Rodriguez, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 5-0 ay gacanta sare ku lahayd kooxda tababare Conte.
Fursado kale oo ay goolal ku dhalin kareen xiddigaha Chelsea ayay iska lumiyeen kulanka ayaana ku soo dhammaaday 5-0 lagu dardaray Everton oo marti ahayd, kooxda Chelsea ayaana sidaasi ku qabtay hoggaanka horyaalka Premier League, iyadoo sugi doonta natiijooyinka berri ka soo baxa kulamada ay ciyaaraan kooxaha Arsenal iyo Liverpool.
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey shantii gool ee ay kooxda Chelsea ku xaaqday Everton oo marti u ahayd